Factory vy vy tsy misy fangarony - Mpanamboatra, mpamatsy entana vita amin'ny vy tsy misy fangarony China
High Class Stainless Steel Balustrade ho an'i Handrail
* Mpahay matihanina amin'ny famokarana balustrade mandritra ny 15 taona izahay.
* Ny vatan-kazo vy tsy manara-penitra dia natao tamin'ny alàlan'ny sokajy 316, votoaty hiarovana amin'ny harafesina, hahazoana antoka fa maharitra sy azo ianteherana.
* Mamiratra sy tsara tarehy
* Rafitra matevina metaly matevina, famolavolana adidy mavesatra, henjana sy maharitra. Mety amin'ny vera matevina 8-12mm (3.1Inch-4.8Inch).
* Ny habe sy ny namboarina namboarina
Handrail-vy lafo vidy lafo
* Ny sasany tsy misy loaka amin'ny vera, tena mora apetraka.
* Hanolotra kojakoja sy fitaovana feno ho an'ny baikoo izahay, ary na ny visy aza dia ao koa.
* Fomba maro ho an'ny safidinao.
* Fiantohana kalitao, azo zahana ny taratasy fanamarinana.
Mpamatsy balkona fefy tsara indrindra
* Izahay dia mpanamboatra vy vita amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny kalitao sy ny vidiny mifaninana.
* Misy refy manokana arakaraka ny fangatahana.
* Volavola maoderina, fijery mivelatra, natao ho an'ny lavarangana. Railing vera fiarovana: mety tsara amin'ny sakany
JKL Stainless vy tanamanga vy sy lalamby no ampiasaina amin'ny fomba isan-karazany ao anaty trano handravahana ireo toerana anatiny sy ara-barotra isan-karazany. Ny felam-boasary fitaratra sy ny arofanina vy dia tsy vitan'ny hoe azo antoka sy azo itokisana fa mahomby. Azonao atao ny manafangaro sy mampifangaro ireo singa amin'ny alalanao amin'ny fomba tianao, mamorona balstrades tena miavaka.
* Manana kojakoja feno ho an'ny lalantsara sy fantsona izahay.
* Serivisy tsara indrindra aorian'ny fivarotana, ny mpanjifa dia afaka manaraka ny toe-java-taratasin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra, tsy maninona amin'ny tsipika vokatra, trano fitehirizana na fandefasana.
* Omeo traikefa matihanina ary tohano ny famolavolana manokana isaky ny fangatahana.
SB-1612 Stainless Steel Railing Post
* Hery sy hamafisana.
* Ampiasaina amin'ny rafitra lalamby fefy.
* Ny fototry ny vokatra fanamarinana kalitao ISO9001.
* Manana kojakoja feno ho an'ny lalantsara sy fantsona ;.
Paositra vy tsy misy fangarony
* Hanolotra kojakoja sy fitaovana feno ho an'ny baikonao izahay, ary na ny visy aza dia ao koa;
SB-1613 Stainless Steel mahitsy Post
* Misy refy manokana arakaraka ny fangatahana
* Misy torolàlana momba ny fametrahana antsipiriany;
* Fomba maro ho an'ny safidinao. .
SB-1611 Handrail Safety Accessories Stainless Steel Balustrade Lahatsoratra ho an'ny Glass
* Manana kojakoja feno ho an'ny lalantsara sy fantsona izahay;
* Izy rehetra dia endritsika manokana, mora hapetraka;
Post-karazany T-type SB-1610 Stainless Steel
* Raha mampiasa SS316 ianao dia tohero ny fikaohon-dranon'ny ranomasina amin'ny lafiny iray.
* Rafitra matevina metaly matevina, famolavolana adidy mavesatra, henjana sy maharitra.
Paositra avo vita amin'ny vy tsy misy fangarony
* Fitaovana tsara kalitao an'ny SS304 / SS316 / SS316L
* Fomba maoderina
Takelaka fototra Handrail, Handrail amin'ny vy mahery, Handrail vy tsy miova, Tohatra Handrail Bracket, Fametahana Handrail mitsangana, Handrails,